CyanogenMod waxay xirtaa albaabbada weligeed; maalinta murugada leh ee Android | Androidsis
CyanogenMod wuu dhintaa wuuna macsalaameeyaa weligiis
CyanogenMod mar walba waxaad heli doontaa booskaaga si fiican loo jecel yahay Dhammaanteena fursad u helay sannadihii hore ee Android si aan u tijaabino ROM-yada caadiga ah. Qaar ka mid ah ROM-yada oo noo ogolaaday inaan haysano software iyo lakab caado ah oo soo bandhigay waxqabad wanaagsan marka la barbar dhigo kuwa soo saarayaasha ee ka tagay wax badan oo la rabo.
Taasi CyanogenMod maanta ayaa sagootiyay murugadeeda weligood qoraal si fiican u sheegaya inay joojiyaan horumarinta ROM-yada. Dabcan, waxay ka tagi doonaan isha furan ama isha furan si horumariye kasta uu u qaato oo uu u sameeyo ROM-kooda caadiga ah. Laakiin waxa la yidhi, qoraal murugo iyo qadhaadh ah oo ku saabsan maalinta Kirismaska ​​​​oo ay tahay in aan ka fikirno waxyaabo kale oo wanaagsan.
Tani waa qoraalka ku jira blog-ka:
Iyada oo qayb ka ah isku-dhafka Cyanogen, dhammaan adeegyada Cyanogen iyo dhismooyinka habeenkii ayaa la sii deyn doonaa laga bilaabo Disembar 31, 2016. Mashruuca Isha Furan iyo koodhka isha la heli karo qof kasta oo raba inuu horumariyo CyanogenMod shaqsi ahaan.
Gaaban, maalin aad u murugo badan Android, tan iyo markii aan wajaheyno mid ka mid ah kooxaha horumarinta kuwaas oo qayb ka ahaa horumarka cajiibka ah ee OS-kan ee qalabka moobiilka. Android lama fahmi karo CyanogenMod la'aanteed, waxaana hubaal ah mustaqbalka inaan waayi doono tirada badan ee horumariyayaal ee aan faa'iido doonka ahayn u soo bandhigay ROM-yada isticmaalayaasha arkay inay u cusboonaysiiyaan taleefankooda noocii ugu dambeeyay ee Android, ama kuwa ay si fudud u doonayeen. telefoonka si uu si fiican u shaqeeyo.
Cyanogen ma cadeyn sababaha go'aankan, laakiin runtu waxay tahay in beryahan dambe aysan waqti fiican ku helin oo xitaa aasaasihii ay ku qasbanaadeen inuu ka tago shirkadda.
Hadda waxaan dhihi karnaa nabad gelyo CyanogenMod oo macne badan lahaa isticmaalayaasha badan sida Android lafteeda. Hubaal ROM-yada ku hadhay ilkooda furan waxaa qaadi doona horumariyayaal iyo cunto kariyayaal, laakiin waxaan idhi, maalin murugo u ah Android.
[La cusbooneysiiyay] Cyanogen Inc waxay xiri doontaa albaabada December 31; iyada oo la kaashanaysa dhisidda habeennada habeenkii iyo CyanogenOS.
[La cusbooneysiiyay 2] CyanogenMod ayaa shalay galab la xaqiijiyay in uu xidhmay albaabada, sida dhammaan hawlgallada. Xiriirintaan waxay ku geyneysaa barta CM ee bogga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » CyanogenMod wuu dhintaa wuuna macsalaameeyaa weligiis
Xuquuqda Qiimaha elektaroniga dijo
Wax kasta oo ku saabsan runtii waa madadaalo in la wadaago!
Jawaab Xuquuqda Qiimaha elektaroniga
Adriano Celentano dijo
U jawaab Adriano Celentano
Miguel Angel Perez Vega muuqaalka booska dijo
Tafaraaruqa ayaa weli sii xoogeysanaya.
Jawaab Miguel Angel Perez Vega
Laakiin run ahaantii, ka dib markii tan laga hadlay in ka badan boqol jeer oo aad dhowr jeer isku dhufatay oo laguu sheegay, weli miyaad ku wareersan tahay CyanogenOS iyo CyanogenMOD?
Marlabaad: caqli yeelo oo baro inaad naftaada ogeysiiso intaadan qorin: MAXAA DHAMAADAY CYANOGENOS maaha CYANOGENMOD.
CyanogenMOD wali waa awood badan waligeed oo waxay leedahay xadhig muddo ah.
Haddii aad rabto, ogow haddii kale, sii wad socodkaaga.
U jawaab Antrax
Waan ka xunahay Antrax, laakiin Maya. Cyanogen Inc ayaa sii socota, midda dhammaata waa CyanogenMoD; waxay joojin doonaan horumarinta ROM-yada sida ay ku caddeeyeen bayaanka. Wax kale ayaa ah in cunto kariye kasta ama horumariye uu qaato il furan oo uu sii wado horumarka. Waa war murugo leh, haa, laakiin waa sidaas.
Maya Manuel, maya.
Aan aragno haddii aan helo:
-> Blog ee shirkadda Cyanogen Inc. shirkad gaar loo leeyahay oo raadinaysay inay ganacsi ka samayso iibinta ROM-yada soo-saareyaasha taleefannada. TANI WAA SHIRKADA JOOJINAYSA HAWLADEEDA.
-> CyanogenMOD blog. Halkan waxba iska beddelaya wax walbana waxay ku sii socdaan jidkooda. Waxba ma beddeleyso sababtoo ah, asal ahaan, waa tabaruceyaal abuuraya ROM-ka. Ma jirto wax faa'iido leh oo dhammaan kaabayaasha lagama maarmaanka ah waxay ka yimaadaan deeqaha.
Waxaan ku adkaysanayaa in, si aad wax ugu qorto blog-ka Android, ma samayn kartid khaladaad cabbirkan. Oo waxaan si dhab ah u rajeynayaa, marka aad ogaato, waxaa jiri doona sixid ku jira boostada blog-ka.
Mar labaad isku darka cyanogens leh cyangoen mod ????
Santiago Diaz dijo
Cyanogen INC wuu dhintay…. Laakiin Cyanogenmod weli wuu noolaan doonaa
Ku jawaab Santiago Diaz
Gelida mar hore waa la cusboonaysiiyay Waad saxan tahay oo waa hagaagsan tahay taasi waa sidaas, hadda waa Cyanogen kan macsalaameeyay CyanogeOS. Haddii CyanogenMod laga waayo Android waxay noqon lahayd calaamad aad u xun; Waxaan xirtay tiro badan muddo sanado ah hadda, sidaas darteed farxad jidhka ah on this Christmas Eve.
Ciid wanaagsan Kirismas dhan!
Habka cajiibka ah ee lagu saxayo kaaga.
Si loo saxo qayb war ah (oo dhammaanteen ku dhici karta), ma marin qorista laba sadar xagga hoose. Waxaa lagama maarmaan ah in wax laga beddelo xogta khaldan ee wararka si dadweynaha aan wax u qorayno, ka dib, ay u ogaadaan xaqiiqada dhabta ah. Haddii macluumaadka beenta ah aan meesha laga saarin, waxaan abuureynaa jahwareer. Taasina waxay ina tusaysaa hab xogeed, taasoo muujinaysa ixtiraamka aanu u hayno akhristayaasha na raacda.
Tartanka meesha ka jira ayaa ah mid aad u badan oo aad u wanaagsan sida tan loo oggolaado.
Saxee waa caqli Manuel !! Ciid Kirismas
Ku jawaab Morgan
Ka dib dhammaan jahwareerka, CyanogenMod wuu dhintay. CyanogenMod lafteeda ayaa shalay ka xaqiijisay blog-keeda waana Mashruuca Lineage Android kaas oo qaada ruuxa nool ee CM ee naga taga.
Sidaa si la mid ah waxaan codsanayaa in la saxo marka khalad dhaco, aniguna waa in aan khaladkayga aqbala oo saxaa haddi ay awoodayda tahay.
Halkan ka raali gali Androidsis guud ahaan iyo gaar ahaan Manuel.
Runtii, waxaa la xaqiijiyay in CyanogenMOD laga saaray ciyaarta.
Oo mar hore maanta, iyada oo aan la sugin 31st, waxay u muuqataa in bogga CyangogenMOD uu joojiyay shaqada.
Maalin murugo leh.
markaas miyuu dhintay? maya? ma xafladaynayey? ufff waa maxay hunguriga
CyanogenMod ayaa mar hore xidhay blog-keeda, mar dambe ma heli karo, dhanka kale Cyanogen Inc. ee blog-keeda waxay ku talinaysaa inay dami doonaan adeegyadooda. 🙁
Jawaab Ardany Jolón
Leagoo Venture 1, oo ah terminaal leh raaxo dhammeystiran wax ka yar 150 euro